इसेवा चलाउन सिकाए प्रतिग्राहक रु ८० सम्म पाइने
काठमाण्डौ । भुक्तानी सेवाप्रदायक इसेवाले रिफर एण्ड अर्न अफर सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण सबैजना घरमा बसिरहेको अवस्थामा यो अफरबाट इसेवा खातामा रिफर गरे बोनस प्राप्त गर्न सकिन्छ । नगदरहित समाजनिर्माणको लागि आफु पनि डिजिटल सेवा प्रयोग गरौँ र अरुलाई पनि प्रोत्साहन गरौँ भन्ने अभियानअन्तर्गत इसेवाले हरेक व्यक्तिलाई...
विद्यार्थीले घरमै निः शुल्क अध्ययन गर्न मिल्ने
काठमाण्डौ । भुक्तानी सेवा प्रदायक इसेवा र मिडास एजुकेशनको सहकार्यमा विद्यार्थीहरूलाई निः शुल्क घरमै अध्ययन गर्न सकिने सेवा व्यवस्था मिलाइएको छ । विश्वव्यापी महामारी निम्त्याएको कोरोनाका कारण सम्पूर्ण स्कुलहरू बन्द रहेको अवस्थामा विद्यार्थीहरूले घरमै बसेर निः शुल्क रूपमा श्रव्यदृष्य मार्फत अध्ययन गर्न सक्नेछन् । अध्ययनका लागी...
डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन : अब इसेवाबाट निःशुल्क कुनै पनि बैंकमा पैसा पठाउन सकिने
काठमाण्डौ। डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साह नगर्ने सरकारी नीतिअनुसार इसेवाबाट आफ्नो बैंक खातामा रकम पठाउँदा शुल्क नलाग्ने भएको छ। इसेवाले हिजो बिहीबार रातिदेखि अप्रिल ३० सम्म लागू हुने गरी बैंकमा रकम ट्रान्सफर गर्दा शुल्क नलाग्ने जनाएको छ। इसेवामार्फत इसेवा खातामै (पी टु पी ट्रान्सफर) गर्दा यसअघि नै निःशुल्क सेवा रहेकोमा अब बैंक...
बीमा प्रिमियम इसेवाबाट भुक्तानी गर्दा नगद उपहार साथै मोबाइल पक्का
काठमाण्डौ । जीवन बीमाको प्रिमियम अनलाइनबाट भुक्तानी गर्नलाई प्रोत्साहन गर्ने उदेश्यका साथ इसेवाले आकर्षक उपहार योजना सार्बजनिक गरेको छ । यस उपहार योजनामा कुनै पनि जीवन बीमाको प्रिमियम इसेवाबाट भुक्तानी गर्दा प्रति कारोबार रू सयसम्म कमाउनुको साथै २५ हजार रूपैयाँ बराबरको मोबाईल जित्न सकिनेछ । यस योजना अन्तरगत एक महिनामा २० देखि ४९ वटा...
नेपाल लाइफको प्रिमियम अब इसेवाबाट भुक्तानी
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स्को बीमाशुल्क(प्रिमियम) इसेवादेखि भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । अनलाइनमार्फत बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न सकिने सेवाको समझदारीपत्रमा इसेवाका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभास सापकोटा र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका तर्फबाट सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाईँले हस्ताक्षर गरे । सम्झौतासँगै...
इसेवा र फिनलिट नेपालबीच वित्तीय साक्षरताका लागि सम्झौता
काठमाण्डौ । नेपालको पहिलो भुक्तानी सेवा प्रदायक इसेवाले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमका लागी फिनलिट नेपालसँग सहकार्य गरेको छ । वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा इसेवाका सिओओ रोशन लामिछाने र फिनलिट नेपालका प्रबन्ध निर्देशक गौरव थापाबीच हस्ताक्षर भयो । इसेवाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत नीजि...
काठमाण्डौ । नेपालको चर्चित गायन रियालिटी शो नेपाल आइडलमा इसेवादेखि भोटिङ गर्न सकिने भएको छ । एपीवान टेलिभिजनबाट हरेक बिहीबार र शुक्रबार बेलुकी ८ः३० बजे प्रसारण हुँदै आएको नेपाल आइडल सिजन तीनमा यसपटक इसेवामार्फंत भोटिङ गर्न सकिने भएको हो । इसेवाको एण्ड्रोइड तथा आइओएस मोबाईल एप्स्मार्फत आफुलाई मनपर्ने प्रतियोगीलाई भोट गर्न...
इसेवाको पर्व अफरका विजेता घोषित, कसले के जित्यो ?
काठमाण्डौ । नेपालको पहिलो पेमेन्ट गेटवे इसेवाले दशैंतिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरेको ‘उत्सवको बहार, हप्तैपिच्छे उपहार’ नामक योजनाका बिजेता सार्वजनिक गरेको छ । यस उपहार योजनामा बम्पर उपहारमा मकवानपुरका लेखनाथ पौडेलले यमाहाको एफ जेड एस एफ आइ भि थ्रि मोटरसाइकल जित्न सफल भएका छन् । यसैगरी अर्को बम्पर उपहारमा...
वित्तीय पहुँच बढाउन इसेवा र यूके एड सक्षमबीच सम्झौता
काठमाण्डौ । इसेवा क्यास पोइन्टको तर्जुमा, विकास तथा कार्यान्वयन गर्नको लागि ईसेवा फोनपे प्रालिले युके एडको सक्षम (एक्सेस टु फाइनान्स)सँग एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । सम्झौतापत्रमा इसेवा फोनपेका प्रमुखकार्यकारी अधिकृत सुभास सापकोटा तथा युके एडको सक्षमका तर्फबाट टिम लिडर निर्मल दाहालले हस्ताक्षर गरे । यस सम्झौतामार्फत्...
काठमाण्डौ । नेपालको पहिलो पेमेन्ट गेटवे ‘इसेवा’ मा एकाउन्ट खोल्नेको संख्या २० लाख नाघेको छ । नेपालीहरु पछिल्ला दिनमा विभिन्न सेवा तथा किनमेलको भुक्तानी मोबाईल तथा इन्टरनेटमार्फत गर्न अभ्यस्त हुँदै गएपछि इसेवामा एकाउन्ट खोल्नेको संख्या तीब्र रूपमा बढ्दै गएको हो । साथै इसेवाले पछिल्लो समय सुरु गरेको ‘रिफर एण्ड अर्न’ अफरका...
'मेरो सेयर' र डिम्याटको शुल्क भुक्तानी इसेवाबाटै गर्न सकिने
काठमाण्डौ । 'सेयर कारोबार' गर्ने व्यक्तिहरूले अबदेखि मेरो सेयर तथा डिम्याट खाताको शुल्क इसेवाबाटै भुक्तानी गर्नसक्ने भएका छन् । योसँगै डिम्याट तथा मेरो सेयरको शुल्क भुक्तानीकै लागि विभिन्न क्यापिटलमा जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिलेको छ । ग्राहकहरूले आफ्नो मोबाईलबाटै शुल्क भुक्तानी गर्न सकिनेछ । इसेवा एकाउन्ट...
साथीभाई र आफन्तलाई इसेवा सिकाए प्रतिग्राहक रु. ३० बोनस पाइने !
काठमाण्डौ । नेपालको पहिलो पेमेन्ट गेटवे इसेवाले आफ्ना ग्राहकको हितको लागि रिफर एण्ड अर्न अफर सार्बजनिक गरेको छ । नगदरहित समाज निर्माणका लागि आफू पनि डिजिटल सेवा प्रयोग गरौं र अरुलाई पनि प्रोत्साहन गरौं भन्ने अभियानअन्तरगत इसेवाले हरेक व्यक्तिलाई अभियन्ताका रुपमा प्रोत्साहन गर्न यो अफर सार्वजनिक गरिएको दाबी गरेको छ । यो...
इसेवाको मोवाइल एप्स १० लाखले डाउनलोड गरे, वित्तीय क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी
काठमाण्डौ । नेपालको पहिलो पेमेन्ट गेटवे कम्पनी ‘इसेवा फोनपे प्रा. लि.’ को मोबाईल एप्स डाउनलोड गर्नेको संंख्या दश लाख नाघेको छ । यो संख्या नेपालका बैंक, वित्तिय संस्था तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै हो । पछिल्लो समय नेपालीहरू मोबाईल तथा इन्टरनेट मार्फत भुक्तानी गर्न अभ्यस्त हुँदै गईरहेको सन्दर्भमा...
बिमाको प्रिमियम पनि अब अनलाइनबाटै, इसेवाले थाल्यो सेवा
काठमाण्डौ । नेपालको पहिलो पेमेन्ट गेट्वे इसेवामार्फत अबदेखि अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स् कम्पनी, मेट–लाइफको प्रिमियम भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । इसेवा मार्फत पहिलोपटक जीवन बीमाको प्रिमियम भुक्तानी गर्न सकिने सेवा सुरू भएको हो । इसेवाबाट विभिन्न ८ वटा निर्जिवन बीमा कम्पनीको पनि प्रिमियम भुक्तानी गर्न सकिन्छ । पहिलोपटक जीवन...
पानी महसुल तिर्न कार्यालय धाउनुपर्ने युगको अन्त, इटहरीबासीलाई पनि यस्तो सुविधा
काठमाण्डौ । विभिन्न क्षेत्रमा बढिरहेको प्रविधिको प्रयोग खानेपानी उपभोक्ता संस्थामा पनि तीब्र हुन थालेको छ । खानेपानीका उपभोक्ताहरुले महशुल भुक्तानीमा प्रविधिको प्रयोग गर्न थालेका हुन् । पछिल्लोपटक सुनसरीको इटहरीका उपभोक्ता इसेवामार्फत् महशुल भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन्् । इटहरीस्थित इटहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता...